Indlu Yindlu evumela abahlali ukuthi bazifunele bona ukuthi bakuphi, okufanisa imizwa yabo, kunokuba babeke ukuthi ziphi ezindlini ezijwayelekile ezimiselwe ngaphambili ngefenisha. Amamitha aphakeme ahlukene afakwa ezikhaleni ezinde ezimise okomhubhe enyakatho naseningizimu futhi axhumeke ngezindlela eziningi, athole isikhala sangaphakathi esicebile. Njengomphumela, kuzokhiqiza izinguquko ezahlukahlukene zasemkhathini. Lo mklamo omusha kufanele ukwamukelwe kakhulu ngokuhlonipha ukuthi baphinda bacabangele induduzo ekhaya ngenkathi bethula izinkinga ezintsha ekuziphatheni okuvamile.
Indawo Yokudlela Ye-Bistro
Indawo Yokudlela Ye-Bistro Inhlanganisela yokudlala yezindaba ze-retro kule bistro yasemgwaqweni, kufaka phakathi izimpahla eziqinisiwe zezitayela zesithonjana: Imvamisa yamakhethini ama-Windsor loveseats, izihlalo zempi zaseDenmark, izihlalo zezimboni zaseFrance, nezivikelo zesikhumba zaseLoft. Lesi sakhiwo siqukethe amakholomu wezitini ezinomshini we-shabby-chic eceleni kwamafasitela wezithombe, ahlinzeka ngemizamo yokugcwala endaweni ezungezwe yilanga, kanye namacici ngaphansi kophahla lwensimbi yensimbi enezakhiwo. Ubuciko bekati yensimbi obunyathela kuyo ubuthi nokugijima ukucasha ngaphansi kwesihlahla budonsela ukunaka, kufana nokhuni olunemibala egqoke imibala yasemuva, ebonakalayo negqwayizayo.
Ukuvuselelwa Kwezakhiwo Zomlando
Ukuvuselelwa Kwezakhiwo Zomlando ETaiwan, yize kunezimo ezinjalo zokuvuselelwa kwesakhiwo esingokomlando, kepha zinomlando obalulekile, ziyindawo evaliwe ngaphambili, manje zivulekile phambi kwawo wonke umuntu. Ungadla lapha, ungathatha uhambo lapha, udlale lapha, ujabulele ukubuka lapha, ulalele umculo lapha, wenze izinkulumo, umshado, futhi usanda kuqeda isethulo semoto yeBMW ne-AUDI, nomsebenzi omningi. Lapha ungathola izinkumbulo zabantu asebekhulile futhi kungaba yisizukulwane esincane ukudala izinkumbulo.
Ukwakhiwa Kwendlu Yangaphakathi Design
Ukwakhiwa Kwendlu Yangaphakathi Design Isikhala sigcwele ukuceba kokuklama, ngokwezinto zokwenziwa nemininingwane esetshenzisiwe kuphrojekthi. Uhlelo lwale ndlu luyisakhiwo esincane se-Z, esibonisa isikhala, kodwa futhi ngokuba inselelo yokwenza umuzwa obanzi nowokuphana kwendawo kwabaqashi. UMklami akazange anikeze izindonga ukusika ukuqhubeka kwendawo evulekile. Ngalo msebenzi, ingaphakathi lithola ukukhanya kwelanga, okukhanyisa igumbi lokwenza i-ambiance futhi lenze isikhala sithandeke futhi sibanzi. Ubuciko buphinde buchaze isikhala ngokuthinta okuhle. Izinsimbi zensimbi nemvelo zakha ukwakheka kokwakhiwa.
I-Equestrian Pavilion I-Equestrian pavilion iyingxenye yesikhungo esisha sabantu abasaqala ukwakha. Into isendaweni yamagugu amasiko futhi ivikelwe indawo yamasiko yokuhlangana okungokomlando kombukiso. Umqondo oyisakhiwo oyinhloko ukukhipha izindonga ezinkulu zedolobha ngokuxhasa izinto ezenziwe ngentambo ezisobala. Isisusa esiyinhloko somhlobiso we-facade iphethini eliqoshiwe lesigqi ngendlela yezindlebe zikakolweni noma i-oat. Izinsika ezincanyana ezincanyana cishe zingaxhaswanga imisebe ekhanyayo yophahla eyenziwe ngokhuni, eyaphakama, lapho kuqedwa ngendlela yesilo sehhashi ekhrintiwe.
Indlu Yangasese Ukwakha isipiliyoni sokuphila esezingeni eliphakeme futhi uchaze isithombe sesakhiwo sokuhlala eKuwait ngenkathi kugcinwa izidingo zesimo sezulu nezidingo zobumfihlo ezichazwe yisiko lama-Arabhu, bekuyizinselelo ezinkulu ezibhekene nomqambi. Indlu ye-Cube iyisakhiwo sezakhiwo ezine zekhonkolo / isakhiwo sensimbi esekwe ngokungeziwe nokususa ngaphakathi kwekhiyubhu ekwakha okuhlangenwe nakho okunamandla phakathi kwezikhala zangaphakathi nezangaphandle zokujabulela ukukhanya kwemvelo nokubukwa kwendawo yonke ngonyaka.
Opx2 Ukufakwa Kwe-Optic Sonto 26 Juni
Vivit Collection Amacici Nendandatho Mgqibelo 25 Juni
Bridal Veil I-Chandelier Lwesihlanu 24 Juni
Indlu Indawo Yokudlela Ye-Bistro Ukuvuselelwa Kwezakhiwo Zomlando Ukwakhiwa Kwendlu Yangaphakathi Design I-Equestrian Pavilion Indlu Yangasese